Mkpuchi ịkpọpu Njikọta
Alaka ọnụ ngọngọ
Ọla kọpa ọnụ ngọngọ
Energy ji atụ Ọnụ ngọngọ
Arọ ugbu a ọnụ ngọngọ
Self-elu njikọ ọnụ
Ọnụ ngọngọ n'ihi metering igbe
The mgba ọkụ ọnụ
Efu n'usoro ọnụ ngọngọ
Mmiri na-egosi nkwụsị igbe
Lie Water àmà nkwụsị igbe
Ọnụ ngọngọ technology
Chọta a ngwaahịa
Basic ihe ọmụma nke ọnụ nkanka na nhọrọ nke isi na-egosi Ọrụ nke wiring usoro bụ ime ka n'ibu na ọkụ na ndị na-eduzi. Nke a ọrụ ike na-irè emejuputa atumatu oru site na iji a crimping etiti na okwu ... GỤKWUO »
Gịnị bụ nzube nke metering nkwụsị igbe
N'ozuzu, ngwá wiring na ubi bụ site metering nkwụsị igbe. Ọ bụ adaba iji chọpụta kpatara mgbe n'oge mmezi usoro. Ọ bụ na ubi mmetụta ma ọ bụ na ngosipụta ngwá n'akụkụ. Ọ nwekwara ike ime ka ndị ọzọ l ... GỤKWUO »
Waterproof nkwụsị igbe atụmatụ
Akụkụ nke waterproof nkwụsị igbe: ● Mmiri na-àmà, waterproof, nchebe na klas IP68 ● Obere size na ìhè ibu ● corrosion eguzogide ● Ezigbo mkpuchi ● Long ọrụ ndụ ● Easy echichi IP68 waterproof ụkpụrụ: The top cover of the ... GỤKWUO »
The ọrụ nke nkwụsị igbe
Ke ufọk mma, nkwụsị igbe bụ otu n'ime ọkụ ngwa, n'ihi na wiring maka mma bụ site na waya tube, na nkwụsị igbe (dị ka ogologo akara, ma ọ bụ na akuku nke waya tube) a na-eji dị ka a The waya tube ... GỤKWUO »
Ihe dị iche n'etiti mgba ọkụ igbe na-ejikọta igbe
Eletriki edoghi na ụlọ na-adịkarị zoro ezo. E nwere igbe maka mgba ọkụ na mgba ọkụ, nke bụ mgba ọkụ igbe. The ọrụ nke mgba ọkụ igbe bụ iji wụnye mgba ọkụ (ofu), na nke abụọ bụ mgba ọkụ wiring. Mgbe ahụ swit ... GỤKWUO »
Ọnụ waya njikọ ihe na ngwa
Na ọtụtụ ngwaọrụ, ọ bụ mgbe mkpa ijikọ ọnụ blocks, na mgbe njikọ, nnyefe nwere ike ji mee. Karịsịa na eletriki dị n'ọhịa, ọnụ ngọngọ dị mkpa karịsịa, na ike na-aghọta dị anya connecti ... GỤKWUO »
Ọnụ blocks nwere ndị classifications
Ọnụ blocks nwere ike kere n'ime WUK ọnụ ngọngọ, European ọnụ ngọngọ series, ikwunye-na ọnụ ngọngọ series, transformer ọnụ ngọngọ, ewu wiring ọnụ, ngere ụdị ọnụ ngọngọ series, spring ụdị ọnụ ngọngọ series, okporo ígwè ... GỤKWUO »
Ọnụ ngọngọ kpatara mgbochi jikoro
Gbaa mbọ hụ na ịghasa bolts nke ọ bụla ọnụ bụ dị mma, na-eji dochie kposara na ikechi. The ọnụ na crimping efere kwesịrị ịgba mbọ hụ na mgbali efere na waya imi (na-akpọ ọla kọpa waya ntị) na-ewepụghị tupu ... GỤKWUO »
Isi nke European ọkọlọtọ ọnụ blocks
The ugbu a mba nke mmiri na Europe kpebisiri ike site nlekota okpomọkụ nke metal eduzi ka nke ugbu a na-abawanye. Mgbe okpomọkụ nke metal pin bụ 45 ° C elu karịa ihere okpomọkụ, ji atụ anya wil ... GỤKWUO »
Anyị ụlọ ọrụ nkwụsị igbe e ọma họrọ ụzọ ụgbọ oloko
Anyị ụlọ ọrụ nkwụsị igbe e ọma họrọ ụzọ ụgbọ oloko Mgbe ọtụtụ-egosi na ntụpọ site na ụzọ ụgbọ oloko, nkwụsị igbe nke anyị ụlọ ọrụ a họọrọ dị ka ndị pụrụ iche nkwụsị igbe maka na ụzọ ụgbọ oloko. Haiyan ọnụ Box Co., Ltd .... GỤKWUO »
Market sales NO.1 ọnụ ngọngọ ọrụ iwebata
The mepụtara nke ọnụ anọwo na n'ihi na a na narị afọ. N'oge gara aga 100 afọ, ụlọ ọrụ e-arụ ụka na Phoenix ka nọgidere na mepụtara ọhụrụ ngwaahịa na imeghari dị iche iche na ọrụ dị iche iche ubi, na-eme na wiring nke electr ... GỤKWUO »
Mkpuchi ịkpọpu mwekota Product ọdabara na ngwa iche
Mkpuchi ịkpọpu mwekota Product ọdabara Iji: mkpuchi mgbapu mwekota bụ ụdị nke na-abụghị amị ike njikọ kwesịrị ekwesị na obere na-eguzogide, pụrụ ịdabere na njikọ, mgbe nile clamping ike, adaba echichi, egosipụta, reusable insta ... GỤKWUO »
Elu àgwà soplaya nke ọnụ ngọngọ, Junction igbe-Haiyan ọnụ Box Co., Ltd.
Dabere ụdị nke elu ọnụ uru na mkpuchi na-eji na-ahọrọ na ngwaọrụ, ngwaahịa ga-arụ ọrụ na a ala karịa gosiri na ugbu a iji hụ na pụrụ ịdabere na ime n'elu chọrọ okpomọkụ nso. Mgbe ụfọdụ, ihe kwesịrị ekwesị n'ihi na kọmpat pac ... GỤKWUO »
Haiyan echetara onye ọ bụla na-ejikọta igbe kwesịrị ntị ka okwu ndị ahụ.
Junction igbe nke dị iche iche ihe na-adịghị adabara agwakọta. Ka ihe atụ, metal ikpe a ebe, fireproof, na ekweghị ekwe bụ mma. Ịkwanyere na ngwaọrụ ndị ọzọ nwere mma mkpuchi Njirimara. Na ojiji, ọ bụghị kwesịrị ekwesị na-ebibi ndị ... GỤKWUO »
Analysis and definition nke e ji mara site na-mgbidi ọnụ blocks
The site-mgbidi ọnụ ngọngọ nwere ike arụnyere nade on a panel na a ọkpụrụkpụ nke 1mm na 10mm. Ọ nwere ike na-akpaghị aka chefuo na ịgbanwe n'ebe dị anya nke panel ọkpụrụkpụ, na-etolite na ọnụ ndokwa nke ọ bụla ọnụ ọgụgụ nke okporo osisi, na ike ... GỤKWUO »
Monday-Saturday	09: 00-18: 00
Anyị na-agbalị na-enye ndị ahịa na àgwà ngwaahịa. Rịọ Information, Sample & Quote, Kpọtụrụ anyị!
Ọzọ Language Sitemap